Safaarada Soomaaliya eey ku leedahay Dalka Biljim ayaa ka Tacsiyeeysay Geerida Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde – Somali Sounds
Safaarada Soomaaliya eey ku leedahay Dalka Biljim ayaa tacsi u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Qoyskii iyo Asxaabtii uu ka geeriyooday Allaha u Naxariistee Ra’isul Wasaarihii hore Soomaaliya Marxuum Nuur Cadde.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Marxuumku door weyn ka soo qaatay Dowlad dhisida Soomaaliya, iyo horumarka hadda la heysto uu qeyb ka ahaa.
War Qoraal eh uu ku saxiixnaa Ali Mohamed Abukar (Ali Wolf) oo ah la taliyaha koowaad ee Safaarada Belgium ahna sii haayaha safaarada oo eey heshay Somalisounds.com ayaa u qornaay Sidaan.
Kismaayo'oo eey xiisad colaad u eg eey ka taagan tahay.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Jubbaland ayaa waxa…
Safaarada Soomaaliyeed ee Dalka Biljim oo ha kisay bixinta baasaboorka soomaaliya
OGEYSIS Dhammaan Dadweynaha sharafta leh waxaa la ogaysiinayaa arrimaha hoos ku qoran. Ayadoo la tixgelinayo…
June 12, 2019 June 12, 2019 Somali Sounds.com
Wasiir ku xigeenka Wasaaraada Amniga ee Xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa uu ka hadlay dagaalkii shalay galinkii danbe ka dhacay Duleedka Magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Wasiir ku xigeenka Wasaarada amniga Soomaaliya Cabdinasir Saciid Muuse ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid taliyihii qeybta Booliska Gobolka Hiiraan Maxamed Macow Xalane, waxaa uuna sidoo kale sheegay in Ciidamada […]
April 7, 2019 April 7, 2019 Mogadishu
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa mar kale martiqaad u diray Madaxda Maamul Goboleedyada inay bishan isugu yimaadaan magaalada Muqdisho, si uu uga dhaco shir Golaha Amniga Qaranka. Shirkan oo loo qorsheeyay inuu dhaco 19-23 April ayaa si gaar ah martiqaad loogu diray Madaxda maamul goboleedyada, iyadoo qabsoomida shirkan la sheegay inuu yahay mid ay […]
Madaxweyne Farmaajo’ oo shir guddoominayay Shirka Garoowe
May 6, 2019 May 6, 2019 Somali Sounds.com
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddoominaya Shirka Wadatashiga Heer Qaran oo maalintii labaad ka socda magaalada Garoowe ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Puntland. Madaxdu waxa ay ka wada hadlayaan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida xoojinta wada shaqeynta, horumarinta dhaqaalaha iyo la dagaallanka argagixisada. Shirkan waxaa ka qeyb galaya Raiisul Wasaraaha Xukuumadda […]